﻿	10 Alka Seltzer အသစ်အသုံးပြုမှု - သိကောင်းစရာများနှင့် Great Ideas!
jalapenos နှင့်ဘေကွန်နှင့်အတူ Mac နှင့်ဒိန်ခဲ
10 Alka Seltzer အသစ်အသုံးပြုမှု
လိုက်နာပါ Penny နှင့်အတူသုံးပါ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်!
velveeta နှင့်မြေပြင်အမဲသားနှင့်အတူ dorito casserole
Alka Seltzer တန်ပြန်ဆေးများကိုပုံမှန်သောက်သုံးသည့်အိမ်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအစာအိမ်နှင့်ဆိုင်သောကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်၊ သင်မှန်းဆ။ မရနိုင်လောက်အောင်အသုံးပြုမှုများစွာရှိသည်။ သင်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်မကောင်းသောအမှားကိုက်ရန်ကြိုးစားနေပါက Alka Seltzer ကူညီနိုင်သည်ကိုသင်အံ့သြသွားနိုင်သည်။ ဆက်ဖတ်ပါ
ပန်း ဦး ရစ်သရဖူကိုနှင့်အတူပူ toddy အောင်ဘယ်လို
အိမ်သာသန့်ရှင်းပါ Alka-Seltzer တက်ဘလက်နှစ်ခုကိုချပြီးမိနစ် ၂၀ အတွင်းမှာဖုန်နှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။
ပိုလန်လက်ဝတ်ရတနာ။ သင်၏လက်ဝတ်ရတနာများကိုရေတွင်နှစ်ချပ်ပြီးတောက်ပသောစင်ကြယ်သောလက်စွပ်၊ လက်ကောက်နှင့်အခြားအရာများအတွက်စုပ်ယူပါ။
အစားအစာအပေါ်မီးရှို့ရာဖယ်ရှားပါ။ သင်၏မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများကိုပူနွေးသောရေနှင့် ၅ ပြားနှင့်ပြည့်အောင်ဖြည့်ပါ။ ပူဖောင်းများသည်သင့်အတွက်ခက်ခဲသောအလုပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မင်းရဲ့ကော်ဖီဆိုင်ကိုသန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပါ။ ကော်ဖီဖျော်စက်ကိုဘီယာစက်ဖြင့်ရေနှင့်ပျော်နေသောဆေးပြား ၃ လုံးကို ဖြတ်၍ အခြားဘီယာချက်ပြုတ်ခြင်းကို“ ဆေးကြောခြင်း” အဖြစ်ပြုလုပ်သည်။ Voila!
တစ်ပိတ်ဆို့ယိုစီးမှုကိုရှင်းလင်းပါ။ သင်ဆေးကြောရန်အတွက်တက်ဘလက် (၃) လုံးကိုအိတ်ထဲထည့်ပြီးဖြူဖြူရှလကာရည်တစ်ခွက်ကိုသင်၏စုပ်စက်ထဲသို့ထည့်ပြီး ၄ မိနစ်ခန့်ရေအေးအောင်လုပ်ပါ။
ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်မှုကိုကုသပါ။ ဆေးပြားနှစ်ချပ်ကိုရေခွက်တစ်ခွက်တွင်ပျော်အောင် (ပုံမှန်အသုံးပြုရန်ကဲ့သို့) ရိုးရှင်းစွာသောက်ပါ။ ၎င်းသည်အပြည့်အဝလွင့်ပျံ့သောရောဂါကူးစက်မှုကိုအထောက်အကူပြုမည်မဟုတ်သော်လည်းသင့်ကိုစောစီးစွာရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
ငါးမျှားပါ ငါးများသည်ပူဖောင်းများကိုဆွဲဆောင်သည်။ ဘယ်သူထင်မှာလဲ။ အပိုင်းအစတစ်ခုကိုဖြတ်ပြီးဆွန်းပလပ်စတစ်ပြွန် jig ထဲသို့ထည့်ပါ။
သင့်အဝတ်လျှော်ဖြူ စုပ်သို့မဟုတ်ပုံးတစ်ပုံးကိုရေပူဖြင့်ဖြည့်ပြီး ၃ ပြားထည့်ပါ။ သင်၏လူဖြူများကိုအဝတ်မလျှော်မီမိနစ် ၃၀ ခန့်စိမ်ပါ။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းကိုကူညီပါ။ ၎င်းသည်အရူးဟုထင်ရသော်လည်းသင်နီကိုတင်းဆေးထုတ်ယူခြင်းကိုဖြတ်သန်းနေပါကသင်သည်တစ်စုံတစ်ရာကိုကြိုးစားလိုလိုလားလားရှိသည်။ တစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ် Alka-Seltzer ဆေးပြားနှစ်ချောင်းသည်သင့်အားထိုဆိုးရွားပြင်းထန်သောစွဲလမ်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ယားယံသောအင်းဆက်ပိုးကိုက်ကိုက်ခြင်း။ တက်ဘလက်နှစ်လုံးကိုရေတွင်အရည်ပျော်ပြီးနောက်ဝါဂွမ်းဘောလုံး၊ အဝတ်စများသို့မဟုတ်စက္ကူပုဝါများကိုဖြေရှင်းချက်ဖြင့်စိမ်ပါ။ နာရီဝက်ခန့်နာရီဝက်လောက်ကိုက်ပါ။
Thunk ဘယ်သူလဲ Alka Seltzer ဟာခက်ခဲတဲ့သန့်ရှင်းရေးအလုပ်ရှိသလားဒါမှမဟုတ်ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်မှုနည်းတာနဲ့ပတ်သတ်ဖို့အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။ တဖန်သင်တို့ကဒါဟာရင်ပူဘို့သာထင် ...